Khabiir Cabbaaris ah wuxuu eegaa Aragti Nabadeed ee Local
Internetku wuxuu noqonayaa mid ka mid ah qalabka suuq-geynta ugu wanaagsan ee qarniga. Shirkadaha waaweyn ayaa ka faa'iideysanaya suurtagalnimada in macaamiisha laga helo moobiilka internetka. Xaaladaha intooda badan, maamulayaasha websaydhada e-commerce waxay galaan suuqgeynta internetka si ay u kordhiyaan joogitaanka internetka. Sida hadafyada kale ee suuq-geynta, waa ujeedada shabakad kasta oo internetka ah si loo gaaro macaamiisha suura gal ah ee suurtogalka ah. Waa guusha hanaanka SEO - ray ban site oficial brasile. Dhinaca kale, ganacsatadu waxay ka faa'iideysanayaan macaamiisha badan oo u socda websaydhooda. Wakaalado badan waxay bixiyaan adeegyo badan oo ah 8 adeegyo SEO ah sida cilmi-baarista iyo keyword keyword.
Oliver King, Maareeyaha Guusha Macaamiisha ee Sare , wuxuu qeexayaa qaar ka mid ah qodobbada muhiimka ah ee looga baahan yahay inay tixgeliyaan marka ay samaynayaan adeegyada SEO-ga ee ganacsigooda:
Ku jiraa liiska magacyada maxalliga ah
Si ganacsi loogu guuleysto adeegyada SEO-ga maxaliga ah, waa in ay jirtaa qaar ka mid ah baahida dhabta ah ee nuuca dhabta ah. Shirkaddaadu waa inay kuqortaa boosaska liiska degaanka halkii ay ka heli lahaayeen qaybo badan oo ka mid ah boggaga hore. Marka qofku sameeyo SEO-yada ganacsi kaas oo dadweynaha u yaqaan, waxaa jira fursad weyn oo lagu guulaysto hawsha marka loo eego marka wax isku mid ah ay ku dhacaan websaydh oo leh nolol yar. Xaalad waliba, adeegsashada raadinta mashiinka waxay raadineysaa in la kordhiyo helitaanka astaanta internetka ee sababo iyo adeegyo kala duwan.
Awoodda dib udhaca
Tababar farsamooyinka cad ee cad
Qaar ka mid ah hay'adaha SEO ayaa laga yaabaa inay codsadaan in ay bixiyaan xal degdeg ah-xalinta si aad webigaaga ugu orodo si deg deg ah. Fikradani waxay khaldami kartaa marka wakiilku bilaabmayo inuu sameeyo qaar ka mid ah 30 mashiinka madow SEO sida qodobka muhiimka ah. Koofiyadaha madow SEO ayaa ka dhigaya boggaaga inuu helo ciqaab rikoodh oo ku jira shabakadaha raadinta raadinta. Xaaladaha daran, goobaha qaar waxay la kulmaan gebi ahaan. Marka dadku isticmaalaan farsamooyin cadcad si ay u sameeyaan adeegyadooda SEO ee deegaanka, waxaa jiri kara faa'iido mudda dheer ah shirkadda iyo sidoo kale macaamiisha.
Shirkad waliba waxay maamuli kartaa shabakadda e-commerce ee guuleysta. Internetku wuxuu samayn karaa shirkad malaayiin macaamiil ah meelo badan oo dunida oo dhan ah. Sidoo kale, ganacsiyadu waxay qabtaan adeegyo SEO ah oo wax ku ool ah kuwaas oo u muuqda inay sameeyaan inta badan internetka. Search Engine Optimization sida farsamada waxay shabakad ka dhigeysaa shabakada internetka oo si muuqata loo arki karo gaar ahaan kuwa raadinaya macluumaadkaan. Marka aad ka faa'iideysanayso gaadiidka internetka, goobaha ganacsigu waxay soo booqdaan kuwa soo celiya macaamiisha, iyagoo gacan ka geysanaya awooddooda iibka. Tilmaan-bixiyahan SEO wuxuu kaa caawin karaa inaad ogaato faa'iidada weyn ee ololehaaga e-commerce. Waxaad awood u yeelan kartaa in aad sameysatid bogag internet ah oo wax ku ool ah oo kaa dhigi kara ku guuleysiga.